Ukuphupha ngeWebstuhl Discover ➡️ Ukufumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Amalaphu alukiwe kwilaphu. Nangona kunjalo, namhlanje, ngokungafaniyo nakwixesha elidlulileyo, oku kwenziwa ikakhulu ngomatshini kwaye akusekho sandla. Nangona kunjalo, abanye bethu basenokuba baqhelene nohlobo oluncinci, loom obekufanele usebenze nayo esikolweni. Imisonto yoboya okanye yengubo ibekwe kwishatile kwaye iqhubeke inyuswe isenyuka ngemisonto ephothiweyo.
Isaluka sinokuvela nakwilizwe lethu lamaphupha. Kwinqaku elilandelayo siza kuchaza ukuba kuthetha ntoni ngokweembono zabaphandi bamaphupha.
1 Uphawu lwephupha «i-loom» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «i-loom» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «i-loom» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «i-loom» - ukutolikwa ngokubanzi
Kutoliko jikelele lwamaphupha, loom ngumfuziselo ubuchule y izakhono zemisebenzi yezandla ijongiwe. Nangona kunjalo, kwangaxeshanye, loom kufuneka iqondwe njengesimemo sokugcina inethiwekhi yakho kunye nokuyandisa rhoqo. Ukujonga i-loom kwimeko yamaphupha kukwathembisa ngomzuzu owonwabileyo kunye nemvisiswano oyakuyichitha nosapho okanye nabahlobo. Oku kunokuba sekhaya okanye ngelixa useholideyini kunye. Ngayiphi na imeko, iya kuba ngumzuzu omangalisayo wokuba abo baphuphayo bonwabe kakhulu.
Ukuba umntu uphupha i-loom, ngokwembono yophando jikelele lwamaphupha, umntu kufuneka aqhoboshele ukubaluleka okukhethekileyo kunxibelelwano nomntu omthandayo. Kubaluleke kakhulu ukuba ungabutyesheli obu buhlobo, kungenjalo ubuhlobo bunokuphulukana.
Ukuba i-loom iqhutywa ngumntu ongaziwayo kwisiganeko sephupha kwaye ujonge nje, batsho Atención! Apha kukho umngcipheko weengxaki ezinkulu kunye nobunzima. Abanye abantu bathetha kakubi ngawe kwaye bayamkela ukuba baya kukwenzakalisa kakhulu. Mamela! Ithemba umntu alixabise kumcimbi othile alizukufezekiswa. Sukubeka ulindelo lwakho phezulu kakhulu, kuba nalapha, uya kudana.
Uphawu lwephupha «i-loom» - ukutolikwa kwengqondo
Isaluka sinophawu lwesixhobo sobomi kutoliko lwengqondo lwamaphupha. Iipateni ezithile kunye neempawu sinikwa zona ekuzalweni. Isiseko esisisiseko, ngokuthetha, esinokuthi sibonakaliswe sisilo. Nangona kunjalo, umntu ngamnye ugqiba ukuba ubomi bakhe buya kukhula buphi. Ngoku, ukuba iphupha lihleli emaphupheni akhe kwi-loom, kufuneka aqonde ukuba yena ngokwakhe uthatha isigqibo ngendlela angathanda ukuphila ngayo ubomi bakhe. Mhlawumbi usebenzisa imibala eyahlukileyo xa usebenza ngomluki. Oku kubonisa ukuba uyakwazi ukwenza isicwangciso sobomi bakho sibe sodwa. Nangona kunjalo, isibindi sokuyiphumeza isenokungabikho. Apha isimboli yephupha elithi "loom" inokukukhuthaza ukuba uzithathele ingqalelo ngakumbi kwaye usebenze. Indlela yokuphila ukuthatha ngesandla.
Ikwaquka nokuluka kwilaphu. Ukukhuthala kunye nokukwazi komntu ophuphayo ukuba anyamezele kwaye anyamezele.
Uphawu lwephupha «i-loom» - ukutolika kokomoya
Ukusuka kwimbono egqithileyo, umfanekiso wephupha elithi "loom" ufanekisela oko i sigqibo kunye Isicwangciso sobomi esingcwele.